မြုံခြင်း၏အဓိပ္ပါယ်မှာ အမျိုးသားနှင့်အမျိူးသမီးနှစ်ဦးအတူတူနေသည့်ကြားမှ တစ်နှစ်အထိသားသမီးရတနာမထွန်းကားခြင်းကိုဆိုလိုပါသည်။လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ စုံတွဲများ၏ ၁၀-၁၈%သည်မျိုးဆက်မပြန့်ပွားနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။အမျိုးသမီးများ၏မျိုးဆက်မပွားနိုင်ခြင်းအကြောင်းရင်းများပေါ်မူတည်၍ကုသခြင်းမှာလဲကွဲပြားခြားနားတတ်ကြပါသည်။သို့သော် ၉၅ရာခိုင်နှုန်းသော စုံတွဲတို့သည် မည်သည့်ကုသမှုမှမခံယူဘဲ ၂ နှစ်အထိကြိုးစားပြီးမှ...
လိင်တံထိပ်အရေပြားဆိုတာ ယောကျ်ားလိင်တံရဲ့ ထိပ်ဖူးကိုဖုံးထားတဲ့ အရေပြားကို ခေါ်တာပါ။ ထိုအရေပြားကို ဖြတ်ပေးတဲ့ ခွဲစိတ်မှုကို လိင်တံထိပ်ဖူးအရေပြားဖြတ်ခြင်း (Circumcision) လို့ခေါ်ပါတယ်။ လိင်တံထိပ်အရေပြားဖြတ်တာကို အချို့ကထုံးထမ်းစဉ်လာအရ လုပ်သလို ဘာသာရေးအရ လုပ်သူများ၊ ကျန်းမာရေးအရလုပ်သူများလည်းရှိသည်။ လိင်တံထိပ်အရေပြား ဖြတ်ခြင်းဖြင့် လိင်ခံစားမှု အာရုံမပြောင်းလဲစေနိုင်ပါ။ ယောကျ်ားလေးတိုင...
ဇနီးမောင်နှံ ၂ ဦးဟာ အကာအကွယ်မဲ့ အတူနေဆက်ဆံပါလျက် တစ်နှစ်ကြာသည်အထိ သားသမီးမရနိုင်ဘူးဆိုရင် infertility လို့ ခေါ်ပါသည်။ သားသမီးရဖို့ အခြေခံကျကျကြည့်လျှင် သန္ဓေတည်တယ်ဆိုတာ မမျိုးဥ ovary နှင့် သုက်ပိုး sperm ထိတွေ့ပေါင်းစပ်ပြီး မျိုးအောင်ရမယ်။ အဲ့ဒီ အောင်ပြီးသွားတဲ့ မျိုးဥဟာ အမျိုးသမီးရဲ့ သားအိမ်နံရံမှာ ကောင်းစွာတွယ်ကပ်ပြီး ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးလာရမယ်။ ရက်ပေါင်း ၁၇၀ လောက် မိခင်ဝမ်းဗိုက်အတွင်...
- Amniotic Fluid လို့ခေါ်တဲ့ ရေမြွှာရည်ပုံမှန်ထက် နည်းနေတာကို Oligohydramnios လို့ခေါ်ပြီး၊ ပုံမှန်ထက် များနေတာကို Oligohydramnios လို့ခေါ်ပါတယ်။ - ကိုယ်ဝန် ၁၂ ပတ်မှာ ရေမြွှာအိတ် ဖြစ်လာပြီးနောက် ရေမြွှာရည်လည်း ဖြစ်လာပါတယ်။ အစပိုင်းမှာ မိခင်ဆီကရတဲ့ရေနဲ့ ရေမြွှာရည်ဖြစ်လာပြီး ကိုယ်ဝန် ၂၀ ပတ်နောက်ပိုင်းမှာ ကလေးရဲ့ဆီးပါရောလာပါတယ်။ ပုံမှန်ကိုယ်ဝန်မှာ ရေမြွှာရည်ဟာ ၈၀၀...
Hymenoplasty ( အပျိုမြှေးပြုပြင်ခွဲစိတ်ခြင်း)
အပျိုမြှေးဆိုတာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အင်္ဂါဝမှာအလွှာပါးလေးတစ်ခုရှိတယ်။ သာမန်အားဖြင့် သေးငယ်တဲ့ အပေါက်လေးတွေပါလေ့ရရှိတယ်။ အရွယ်ရောက်လို့ မီးယပ်သွေးပေါ်ရင် မီးယပ်သွေးက ဟိုင်မင်အပေါက်ကနေ အပြင်ကို စီးထွက်နိုင်တယ်။ အဲ့ဒီဟိုင်မင်က အပိတ်ဖြစ်နေရင်တော့ မီးယပ်သွေးပေါ်တဲ့အခါ ပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်။ သွေးတွေအပြင်မထွက်နိုင်တော့ သားမွေးလမ်းကြောင်း သားအိမ်အတွင်းမှာ ခိုအောင်းပြီး ပြဿနာ ဖြစ်တာပါ။
မွေးဖွားလာမည့်ကလေးရဲ ့လိင်ကို ပြုပြင်လို ့ရနိုင်ပါသလား? ဥပမာ -ယောကျင်္ားလေးလိုချင်ရင် ယောကျင်္ားလေး၊ မိန်းကလေးလိုချင်ရင် မိန်းကလေးရနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးရှိနိုင်မလား? ထိုသို ့ရနိုင်ရန်အတွက် နည်းလမ်းတစ်ချို ့တော့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တိကျခိုင်လုံတဲ့ သက်သေအထောက်အထားများတော့ မရှိသေးပါဘူး။ သိပ္ပံနည်းကျ စမ်းသပ်ထားခြင်းလည်း အနည်းငယ်သာရှိပါတယ်။ သဘာဝနည်းလမ်းများထဲမှ ထင်ရှားတဲ ့...
ပန်းသေပန်းညှိုးခြင်းသည် အသက် ၄၀ မှ ၇၀ အတွင်းရှိ အမျိူးသားများတွင် အဖြစ်များတတ်သော ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ဖြစ်ပွားရသော အကြောင်းရင်းများရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေများကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေများကြောင့်သော်လည်းကောင်း ပန်းသေပန်းညှိုးခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ- သွေးတိုးရောဂါ...
ကျွန်တော် ကျန်းမာရေးဂျာနယ်တစ်ခုမှာ ဖတ်ဖူးတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို မေးချင်ပါတယ်။ Small penis syndrome တဲ့ ဆရာ၊ အဲဒီအကြောင်းလေး သိချင်ပါတယ်ဆရာ။ အဲဒီရောဂါကရော တကယ်ရှိလား ဆရာ။ရှိတာပေါ့ဗျာ။ ရှိတာမှ အများကြီးလို ့တောင်ဆိုရမှာ။ လွဲမှားတဲ့ အတွေ ့အကြုံဗဟုသုတတွေကြောင့် အမှန်မဟုတ်တာကို အမှန်လို ့ထင်နေတတ်တာ။ စိတ်ဝေဒနာ အနုစားလေးတစ်ခုလို ့ပြောချင်တယ်ဗျာ။ အမျိုးသားတစ်ချို ့ဟာ မိမိရ...
Gynaecomastia (အမျိုးသားများတွင် ရင်သားကြီးခြင်း)
အကျဉ်းရှင်းလင်းချက်အမျိုးသားများတွင် အီစထရိုဂျင် (estrogen) နှင့် တက်စတိုစတီးရုန်း (testosterone) စသည့် ဟော်မုန်းများမညီမျှ မှုကြောင့် ရင်သားကြီးလာတတ်ပါသည်။ထိုအခြေအနေသသည် ရင်သားတစ်ဖက်တည်းသော်လည်ကောင်း၊ ၂ဖက်စလုံးသော်လည်းကောင်း၊ တစ်ခါတစ်ရံ ရင်သားမညီညာခြင်းများလည်း ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည်။မွေးကင်းစ ကလေးငယ်များ၊ လူပျိုဖော်ဝင်စ ယောကျ်ားလေးများ နှင့် အသက်ကြီးသော အမျိုးသားများတွင် ပုံမှန်ဟော်မု...
Male infertility ( အမျိုးသားမြုံခြင်း )
အကျဉ်းရှင်းလင်းချက်- ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းသောစုံတွဲများသည် သန္ဓေမအောင်ခြင်း (သို့ ) မြုံခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။. သန္ဓေမအောင်ခြင်းဆိုသည်မှာ အကာအကွယ်မပါသော လိင်ဆက်ဆံမှုပြုသော်လည်းအချိန်တစ်နှစ်ထိကိုယ်ဝန်မရရှိခြင်းကိုဆိုလိုပါသည်။ထိုသို့သောစုံတွဲများ၏တဝက်ကျော်သည် ယောကျာင်္းမြုံခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။လက္ခဏာများ- ကလေးမရရှိခြင်းသည် အဓိက လက္ခဏာတရပ်ဖြစ်ပါသည်။-...